Wasiirada Urur Goboleedka Igad oo soo wada gaaray Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiirada Arrimaha dibadda wadamada IGAD, ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho, kuwaa oo ka qaybgalaya shirka 53-aad ee Wasiirada arrimaha dibadda IGAD, oo maalinta berri ah ka furmaya Magaalada Muqdisho.
Waxaa Saxaafadda si wadajir ah ula hadlay Wasiirka Arrimaha Dibadda SoomaaliyaDr. C/raxmaan Ducaale Beyle, Wasiirka Arrimaha Dibadda Ethiopia Dr. Tedros Adhanom, Xoghayaha Guud ee Urur Goboleedka IGAD Maxbuub Macalin.
Wefdigaan, ayaa waxaa caawa munaasabad ballaaran loogu qaban doonaa Qasriga Madaxtooyada ee Villa Somalia, iyadoo ay ka soo qaybgeli doonaan fanaaniinta iyo majaajiliistayaasha degan Magaalada Muqdisho.
Maalinta Sabtida, ayaa waxaa lagu wadaa in xubnahaan ay ku kulmaan Hotelka S.Y.L, oo kaabiga ku haaya Qasriga Madaxtooyada ee Villa Somalia.
Sidoo kale warar aan la xaqiijin, ayaa waxay sheegayaan in wefdigaa la dejin doono S.Y.L Hotel, mudada ay booqashada ku jooggaan Magaalada Muqdisho.
Ammaanka Magaalada Muqdisho, ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana iska kaashanaaya Ciidamada Dowladda Somaliya iyo Xoogaga Midowga Afrika ee Amisom.
Boqolaal askari, ayaa waxaa lagu arkayaa wadooyinka ugu muhiimsan ee Magaalada Muqdisho, waxayna hakad geliyeen dhaq dhaqaaqii gawaarida ee Caasimada.